Sonos Arc, markay heer sare timaado qaab muuqaal dhawaaq ah | War gadget
Sonos Arc, marka heer sare ku yimaado qaab soundbar
In yar in ka badan usbuuc ka hor, Sonos wuxuu bilaabay dagaal ugub ah, oo ay ku jiraan Sonos Arc cusub, barxad dhawaq oo u timid inay bedesho Sonos Paybar. Xuquuqda halkan waxaan ku sameynay sanduuqa oo waxaan kuu sheegnay dareenkeena ugu horeeya ee ku saabsan sheyga, oo hadda gabagabadii ugu dambaysay ayaa timid.
Waxaan kuu soo gudbineynaa dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan calaamadda dhawaaqa cusub, Sonos Arc. Nala joog maxaa yeelay waxaan haynaa fiidiyow aan ku tusinayno awoodiisa, waxaan sidoo kale diirada saari doonaa dhamaan faahfaahinta, tan ugu fiican iyo tan ugu xun, ee khibradeena isticmaale.
Sida had iyo jeer ah, xaga sare ee maqaalkan waxaan kaaga tagi doonaa xiriiriye si aad uga dhex aragto fiidiyowga falanqeynteenna dhammaystiran ee Sonos Bar cusub, haddii taas beddelkeed aad rabto inaad ogaato sida loo qaabeeyey ama waxa ku jira sanduuqa, ee CADADKA Waxaan kaa tagi doonaa gabi ahaanba wax walba. Dhinaca kale, haddii aad horeyba u hubsatay, Waxaad ka iibsan kartaa Sonos Arc cusub shirkadda Amazon qiimaha ugu wanaagsan iyo dammaanad buuxda.
1 Naqshad: Guul guul leh
3 Dhawaaq: Sonos wuxuu soo saarayaa usha markale
4 Qiimaha lagu daray: Qaabeynta iyo qaabeynta
5 Caawiyeyaal ficil iyo adeegyo kale
6 Fikirka tifaftiraha iyo khibrada isticmaale
Naqshad: Guul guul leh
Way kugu adkaan doontaa inaad rumeysato wax kasta oo gudaha ku jira markii aad ogaato astaamaha farsamada. In kasta oo aan oggolaan doonno inaan la kulanno shey cabbiraya aan ka yarayn 1141,7mm dheer, dhererkiisu yahay 87mm dhererkiisuna yahay 115,7mm. Waa mid aad u dheer, oo aad u dhuuban. Dabcan, ma iloobi karno inuu culeyskiisu yahay 6,25 kg, waxaad si dhakhso leh u ogaanaysaa isla marka aad isku daydo inaad ka saarto sanduuqa.
Xaqiiqda ah in sheyga maqalka uu culeyskiisu badan yahay guud ahaan waa war wanaagsan, marka laga hadlayo Sonos Qalabkoodu ma ahan mid si khafiif ah u fudud inkastoo dhismahooda polycarbonate, laakiin eedda inteeda badan waxaa leh biraha gudaha oo tayo sare leh oo diiradda saaraya gudbinta codka si ay ula mid noqdaan.
Sonos Arc wuxuu si gaar ah ugufiicanyahay TV-yada qiyaastii 50 inji, waxaan leenahay kiiska polycarbonate -ka oo buuxa oo gaduud ah (76.000 godad wadar ah), in kastoo salka hoose aan ku leenahay saldhig silikoon oo fidsan Waxay ka caawisaa xasilloonideeda iyo bixinta dhawaaq cad. Waxaa lagu heli karaa laba midab: Madow iyo caddaan, Sonos Arc-kan ayaa ku daraya nashqadda astaanta.
Waxaan leenahay laba tilmaamayaal LED ah, mid ka mid ah qaybta dhexe oo leh Dareeraha IR loogu talagalay mashiinka fog ee noo sheegi doona dejinta isbeddelada, iyo sidoo kale tilmaame firfircoon oo loogu talagalay makarafoonka midigta fog. Xakameynta warbaahinta taabashada waxay ku sii jirtaa xarunta sare iyo makarafoonka halka uu ku shaqeynayo Laydhkiisa.
Waxaan aadeynaa qeyb kale halkaasoo shaki la’aan Sonos Arc ay ina xusuusineyso inay tahay a wax soo saarka heerka Aan aragno waxa aan gudaha ku hayno:
3 3/4 ″ Tweeter
8 woofers elliptical
11 Kordhiyeyaasha Fasalka D.
Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale leenahay a maskaxda taas ayaa dhaqaajin doonta waxaas oo dhan:
QuadCore 1,4GHz CPU A53 naqshadaha
1GB SDRAM xasuusta
4GB NV keydinta
Natiijadu waa sidii la filayay, iswaafajin iyo Dolby Atmos iyo Dolby True HD. Sida iska cad waxaan horey u ognahay sababaha kale ee iibsigaaga:
Sida for isku xirnaanta Gabi ahaanba waxba kama maqnaan doonno, waxaan u iftiimineynaa qalabka wax lagu beddelo maqalka ee HDMI 2.0 oo ku jira xirmada:
HDMI 2.0 oo leh tikniyoolajiyadda ARC iyo eARC
Fekerka indhaha (waxaa loo beddelay HDMI)
45/10 RJ100 Xiriirinta Ethernet
802.11bg WiFi laba band ah
4 makarafoonada dhaadheer
Dhawaaq: Sonos wuxuu soo saarayaa usha markale
Waxaan leenahay 5.1 bar-dhawaaq in aan sidoo kale u habeyn karno nidaam hareeraha ah, sida kiiskeenu yahay. Waxaan u isticmaalnay Sonos Arc TV-ga hoostiisa iyo labo Sonos Ones ah taageerada kursiga fadhiga. Waa inaan adkeynaa inaan u baahan nahay TV leh HDMI ARC / eARC si aan u awoodno inaanu cabudhino kartida, maxaa yeelay la'aanteed xiriirkaan waxaan waayi doonnaa soo jiidashada oo dhan.
Sonos Arc wuxuu cadeeyaa waxa uu soo dejinayo oo uu si fiican ugu shaqeynayo, Natiijadu waxay tahay in wadahadaladu aysan lumin, waxaan leenahay wadarta guud ee codadka codadka, dhageysiga muusikada iyo filimada labadaba.
Tani dhib malahan markii aan sare u qaadno mugga heerarka sare, heesaha oo aad u murugsan sida boqoradda Bohemian Rhapsody waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud u kala saarno dhammaan codadka, qalabka iyo iswaafajinta. Kani waa markaan si dhakhso leh u ogaanno inaan ka horreyno bar-dhawaaqeedka oo leh kala duwanaanta ugu firfircoon ee waligeed dhaaftay keydkeenna imtixaanka.
In kastoo, kaliya «laakiin» ee aan heli karnaa ay yihiin baaska, inkasta oo aan ku hagaajin karno EQ, haddana sida muuqata ma sababo saameynta "Wow" inta hartay inteeda kale. Way fiican yihiin, cod dheer yihiin, oo feejignaan karaan, laakiin maaha heer sare oo aad ku gaarsiin lahayd Sonos Sub.
Qiimaha lagu daray: Qaabeynta iyo qaabeynta
Waxaan ka hadleynaa hagaajinta yar-yar ee aan maalin walba sameyno sida aan u ogaanno badeecada si qoto dheer. Habeennada filimka, galabnimada kubadda cagta iyo ciidaha ayaa halkan yaalla. Sonos Arc-kan ayaa noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano codka Dolby Atmos ayada oo aan keenin caro deriska, waqti weyn ku daawanno guusha kooxdeena iyo xitaa ku tuurista xaflada qarniga gurigaaga, daqiiqad kasta waxay leedahay qaabkeeda:
Codka Habeenkii: Qaabkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan xadidno dhawaaqyada sida qaraxyada iyo muusigga codadka badan leh ee filimada iyadoo aan luminayn xoogaa kooban Waxay u shaqeysaa si aan caadi aheyn.
Hagaajin de wada hadal: Marar badan codka asalka ama muusiggu wuxuu faragalin ku yeelan karaa wadahadalka aflaamta qaar, in Sonos sifiican uyaqaano una diyaariyo qaabkan aan lumin doonin qoraalka.
Marka laga reebo, barnaamijka S2 diyo midka aan ka hadlayno Halkan, waxaa ku jira mid fudud laakiin waxtar leh is barbardhiga taasi waxay ku hagaajin doontaa codka dhadhankeenna.
Caawiyeyaal ficil iyo adeegyo kale
Ku daris weyn Sonos Arc waa si sax ah in aan si buuxda ula jaanqaadi karno seddexda maamule ee waaweyn ee guriga caqliga badan: Apple HomeKit (AirPlay 2), Amazon Alexa iyo Kaaliyaha Google. Waxaan kuu sharaxnay munaasabado kale sida loo xakameeyo gurigaaga dhijitaalka ah ee Sonos, khibradna loo leeyahay Sonos Arc-kan ayaa howsha waday.
Marka kaaliyaha dalwaddii la doonayo lagu daro, kiiskeena Amazon Alexa, Afaraheeda makarafoonada dhaadheer ayaa noo ogolaaday inaan sameyno waxqabadyo maalinle ah wax carqalad la'aan ah, xitaa markii Sonos Arc uu ku ciyaarayay nuxur aad u sareysa:
Muusiga ka daar Spotify
Daar nal nal smart oo daar
Maamul waxyaabaha ka baxa TV-ga oo daar oo dem
Xudduudda adiga ayaa dejinaya arrintan. Codsiga S2 ee aan horay u aragnay (Halkan) wuxuu horay noo baray waxay awood u leedahay. Inta badan waxaan ku raaxeysanay Spotify Connect, Apple Music iyo Sonos Radio iyadoo heer sare la mid ah had iyo jeer.
U soo dejiso Sonos Android
Soo dejiso Sonos ee iOS
Fikirka tifaftiraha iyo khibrada isticmaale
Wax badan ayaan ka haynaa wax ku saabsan Sonos Arc, waa inuu ahaadaa mid aan shaki kujirin inuu ku garaaco gudaha baararka dhawaaqa, waxaan leenahay kala duwanaansho, dhawaq kala duwan oo qiimo leh, isku xirnaan iyo astaamo caqli badan. Sonos waxay dib u tijaabisay baararka dhawaaqa leh Arc-keeda waana lagu adkeynayaa inay istaagaan. Haddii aad ka heshay, waad iibsan kartaa Halkan ka € 899, ama bogga rasmiga ah ee Sonos.
Naqshadeynta Minimalist, tayo sare leh iyo saxsanaanta, had iyo jeer waxay umuuqataa mid wanaagsan
A dhawaaq kala duwan oo heer sare ah, heer sare ah oo aan ka badan
Isku xirnaanta sare iyo shaqeyn dheeri ah oo leh barnaamijka S2
HomeKit, Alexa iyo iswaafajinta Kaaliyaha Google
Baasaboorka, oo ah kooxda inteeda kale oo aad ufiican, waxay ina xusuusineysaa inaysan wax yeeleyn doonin iibsashada Sonos Sub
Qiimuhu wuxuu noqon karaa mid mamnuucaya waxyaabaha guud ee dadka dhinta
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sonos Arc, marka heer sare ku yimaado qaab soundbar
Ka ilaali daalacashada internetka mar walba NordVPN
Sida loogu waco lambar qarsoodi ah hawl wade kasta